ဆူကီဆော့စ်(သို.) ဟော့ပေါ့ဆော့စ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဒီဆော့စ်ရည်မျိုးကတော့..ဆူကီ ၊ ဟော့ပေါ့ ၊ မူကထ လို.ခေါ်တဲ့ကင်စားပြုတ်စားတဲ့အိုးမျိုးတွေအတွက်အခြေခံဆော့စ်ရည်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ ......................၅ တက်
ငရုတ်ခြောက်နီ(တောင့်ရှည်).. ၁၂ တောင့်ခန်.
ကြက်သွန်ဖြူ သနှပ်အဖတ်...........၁ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ သနှပ်အရည်............၁ ဇွန်း
သာမန်ငရုတ်ဆော့(စ်) ..............၂ ဇွန်း
နှမ်းလှော်မှလွဲပြီး..ကျန်တဲ့အရာတွေကို ကြိတ်စက်မှာထည့် ၊ ညှက်နေအောင်